ankoatry ny fiakaran’ny fiara marobe avy amin’ny faritra mba hitatitra entana novidiana eto Tanà ka hamidy amin’ny krismasy. Sempotra tanteraka Antananarivo vokatr’izany rehetra izany ary mila adim-pamataran’andro maromaro vao mampiasa fiara ankehitriny.
Mitaraina ankehitriny ny mpiasan’ny seranam-piaramanidina ao Antalaha noho ny tsy fahazoan’izy ireo ny karamany izay efa fito volana ankehitriny. Nanao fampitandremana izy ireo fa raha tsy aloa ao anatin’ny telo andro ny karama dia hanao fitokonana faobe izy ireo. Notsipihan’ireo olona fa mifanilika ny Adema sy ny Acm amin’ity raharaha ity. Ny fiaramanidina manokana sy zotra manokana no tena betsaka amin’ity seranana ity ary angamba no isan’ny hialàn’ny fanjakana ny karaman’ny mpiasa.
Nisy naka an-keriny omaly tolakandro ny tale jeneralin’ny orinasa Transfy Toamasina, mitondra ny anarana Armane Kamis. Teo amin’ny biraony tao Ampasimazava Toamasina izy no nalain’ireo olon-dratsy izay nitondra fiara 309. Ny fiara Touareg miloko sokola izay an’ilay karàna ihany no nitondràn’izy ireo azy nitsoaka. Tokony ho tamin’ny telo ora sy fahefany teo no nitranga ilay kidnapping tao Toamasina. Tsy mbola nisy antso nifanaovan’ny fianakaviana sy ny mpaka an-keriny omaly.
Nivarahontsana indray ny tanànan’i Toliara sy ny manodidina azy manoloana ny fisian’ny zazalahy kely izay notsoahina ny masony. Kilemaina izy io ary vao enin-taona monja no nisy nanao herisetra izay tsy mbola fantatra izay tena antony nanaovana an’izany. Mandeha ny feo fa halatra taova no nitranga. Misy koa anefa ny milaza fa hanaovana ody gasy izay hahafahana manao « masobe tsy mahita » no antony nangalàna ny maso. Fanindroany izay tao anatin’ny telo volana no nisian’izany.
NISOLOKY HO TATSAMBO
Nosamborin’ny zandary ny telo lahy izay mpisoloky ka milaza ho mahatafiditra ho tatsambo. Vola mitentina dimy tapitrisa ariary no alain’izy ireo amin’olona ary efa marobe no voan’ity fikambanan-jiolahy mpisoloky ity. Misandoka ho mpiasan’ny APFM na ny sampam-panjakana izay manome alalana ho tatsambo ireo olon-dratsy. Nandeha ny fikarohana noho ny habetsahan’ny fitarainana izay tonga tao amin’ny zandary ary dia izao nitarika ny fisamborana azy ireo izao.
FANAFIHANA ANY MAEVATANANA
Mihorohoro ny olona ao Maevatanana noho ny fisesin’ny fanafihana mitam-basy. Miisa 15 ireo vatan-dehilahy tompon’antoka tamin’ny fanafihana ary toeram-pivarotana dimy no indray nanamparan’ireo ny asa ratsiny. Mitentina folo tapitrisa ariary sy entana maro no lasan’ireo olon-dratsy ary nanam-potoana izy ireo nanatontosana an’izany satria naharitra adim-pamataran’andro roa mahery izany. Nilaza mihitsy ireo olon-dratsy fa tsy azo atao na inona na inona.
TIFITIFITRA TENY AMIN’NY RN7
Raikitra indray ny tifitifitra teny amin’ny lalam-pirenena fahafito. Tao anatin’ny haizina no nisy nanafika ny taksibrosy iray izay soa ihany fa nitondra zandary mpiaro ny mpandeha. Teo Ivato-Centre, Ambositra no nitranga ny fanakanan-dalana tamin’ny vato. Vao nivoaka ny mpitandro ny filaminana dia tora-bato avy hatrany no niandry azy ireo. Namaly tifitra tao anatin’ny maizina ary dia iray no maty, roa naratra tamin’ireo jiolahy mpanakan-dàlana. Tsiahivina fa vao afak’omaly koa no nisy mpandeha taksibrosy maty voatifitry ny jiolahy mpanakan-dalana tamin’ny RN44.